Filtrer les éléments par date : mercredi, 03 mai 2017
mercredi, 03 mai 2017 22:35
Andro eran-tany ho an'ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety
Nomarihina tetsy amin'ny IEP Ampandranana ny fankalazana izany, ary dia tsy nahitana ireo patron de presse tonga teny izay nasaina hanatrika ity fankalazana ity.
Nanao fanambarana moa ireo tompon'ny orin'asatserasera fa efa ho 300 andro izao no nanaovan'ny fanjakana amboletra ny Lalàna mifehy ny serasera ary tsy misy ny fahalalahana, ka lasa fiatsaram-belatsihy fotsiny sisa ity fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety ity, nefa dia ny jadona no misy.
Anisan'ny novoizina teny moa ny fihaonana an-databatra boribory ho an'ireo tompon'ny orinasan-tserasera sy ireo mpanao gazety, ary ny tsy fahampian'ny fitaovana ho entina manantanteraka ny asa an-gazety.
Mampikony: Tapaka, nametrahan'ny Fokonolona barazy ny lalam-pirenena faha-6
Tapaka io alina io ny lalam-pirenena faha-6, eo amin’ny sampanana Malakialina, Distrikan’i Mampikony.
Nisy Zandary iray avy ao amin’ny “Poste Avancé” Malakialina nitifitra ka nahafaty tovolahy iray, 20 taona eo, avy eo nitsoaka.
Tezitra noho izany ny Fokonolona indrindra ny Betsirebaka, izay Foko misy ity namoy ny ainy ity, ka fanaovana sakana amin’ny lalam-pirenena faha-6 no nanehoan’izy ireo izany.
mercredi, 03 mai 2017 22:22
Fianarantsoa : Miova fomba fiady ny mpitatitra rongony
Tra-tehaka tao anaty fisafoana teo amin'ny fisavàna teo Ankidona Fianarantsoa ny gony miisa 4 misy rongony. Avy any Ihosy hiakatra ho any Antsirabe ny fiara fitateram-bahoaka nitondra izany.
Nofonosina gony misy ampombo ny gony kely misy ireo zavamahadomelina. Tsy misy amantarana azy mihitsy izany ety ivelany.
Mitontaly 50 kg ny fitambaran'ireo rongony ireo raha ny tombatombana nataon'ny mpitandro filaminana.
Ny 01 mey no tratra izany ka aroso ny Fampanoavana ny raharaha. Hatreto kosa dia mbola tsy misy anarana mivoaka momba ny tompon'ny entana fa ny olona nitatitra azy no hiakatra eny amin'ny Fitsarana.
mercredi, 03 mai 2017 21:26
Mahajanga : Nomarihina tami-dromoromo ny Fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety
Diabe niainga teny amin'ny Bord de la Mer niazo ny Lapan'ny Tanàna narahina zumba no nisantarana ny fankalazana nasionaly ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety, izay atao eto Mahajanga.
Misy ihany koa ny fampiratiana ataon'ireo orinasan-tserasera misy sy manana solontena aty an-toerana. Faranana amin'ny loabary an-dasy iresahana mahakasika ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara ny hetsika fanamarihana ny 3 mey.
mercredi, 03 mai 2017 14:08
France: Duel entre Macron et Marine
Ce soir, mercredi 03 mai 2017 à 21 heures, heure de Paris, 22 heures à Madagascar, en direct sur TF1, BFMTv et France 2, les deux candidats retenus au 1er tour des présidentielles françaises, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, seront face à face devant des millions de téléspécateurs, avant le vote decisif ce dimanche 07 mai 2017.
mercredi, 03 mai 2017 14:05
Ce soir, mercredi 03 mai 2017 à 21 heures, heure de Paris, 22 heures à Madagascar, en direct sur TF1 et France 2, les deux candidats retenus au 1er tour des présidentielles françaises, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, seront face à face devant des millions de téléspécateurs, avant le vote decisif ce dimanche 07 mai 2017.
mercredi, 03 mai 2017 11:31
Insolite: Rixe dans l'avion Tokyo Japon - Phoenix Los Angeles
Rixe dans l'avion reliant Tokyo Japon - Phoenix Los Angeles ce 1er mai 2017
mercredi, 03 mai 2017 11:29
Sidina mampitohy an'i Tokyo Japon - Phoenix Los Angeles: Raikitra ny rombo
Raha mbola teo ampakana toerana daholo ireto mpandeha ny fiaramanidina mampitohy an'i Tokyo Japon sy Phoenix Los Angeles, ny 1 mai teo, no asa izay naharombotra tampoka ity mpandeha iray ka avy dia namely totohondro ilay mpandeha tao aoriany.
Raikitra arak'izany ny rombo tao anaty fiaramanidina. Nihezaka nanasaraka ireo mpiandraikitra ny fiaramanidina, fa dia nianika seza mihitsy ary dia nifanjevo tanteraka izy roa lahy.
mercredi, 03 mai 2017 10:47
Vanille: Flambée du prix
Suivant les régions, globalement la campagne de la vanille s'ouvre ce vendredi 06 mai, toute la filière est en effervescence actuellement.
mercredi, 03 mai 2017 10:16
Fifamoivoizana : Ho Hentitra ny fampiharana ny lalàna eto Sambava
Tsy handefitra amin’ireo tsy manaja ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana indrindra ireo mpitondra moto tsy manao aroloha ny mpitandro ny filaminana, hisorohana ny loza izay nisesy tato ho ato, ary namoizana ain’olona mihitsy aza.